i-Youth ODI yesithathu ayidlalwanga imvula
Kugcine imvula kumdlalo wesithathu we-Youth One-Day International (ODI) phakathi kwama-Coca-Cola South Africa under-19s ne-England umisiwe kungaphoswanga ngsho ibhola elilodwa e-Scarborough Cricket Club ngeSonto. Izivakashi ziqede i-tour kahle, zinqoba i-series yemidlalo emithathu ngo-2-0.
Oshayayo, u-Jonathan Bird, ukonyeliswe njenge-Player of the Series ngomsebenzi wakhe oncomekayo eshaya phezulu kuma-South Africans. Lomdlali oneminyaka engu-17 uthole ama-runs aphelele angu-193 (43x4s, 2x6s) kuma-innings amabili, okubalwa khona, u-142 engaohumanga kumdlalo wesibili e-Newcastle ngoLwesihlanu oludlule.
Umqeqeshi u-Lawrence Mahatlane neqembu lakhe bazobuya e-South Africa ngoLwesibili emuva kokuba iqembu lokuqala le-SA U19s elinqobe i-One-Day series e-England kusukela ngo-2003. Ukapteni u-Wandile Makwetu, uvala umsebenzi wakhe edlalela ama-under-19 elingene no-Quinton de Kock njengomdali onemidlalo emningi kuleleizinga nemidlalo engu-30.
Ama-SA U19s ahlele ukuqeda i-One-Day series iSA U19s ingaphambili ngo-1-0 kwi-Youth ODI Series Ama-SA U19s aqinile ngasekushayeni nokho usuku lokuqala luphazanyiswe imvula kusuku lokuqala u-Mahatlane uzisola ngokushoda kwama-runs emuva kokuhlulwa kwi-Youth Test defeat i-England ingaphambili ngo-1-0 kwi-Youth Test series Ikhulu lika-Banton kwi-England njengoba u-Peters eqhakazela i-SA U19s osukwini lesibili olumnandi u-Wandile Makwetu uzoba ukapteni we-SA U19s e-England u-Van Tonder ungaphambili kwabe-SA abathathu kwi-ICC U19 World Cup Select XI Ama-SA U19s ayiqeda kahle i-World Cup Ukuqhuba okokugcina kuma-SA U19s Ama-SA U19s ahlela indlela ebheke phambili